विवाहित पुरुष संग किन आकर्षित हुन्छन युवतीहरु ? यस्ता छन ६ कारण – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/विवाहित पुरुष संग किन आकर्षित हुन्छन युवतीहरु ? यस्ता छन ६ कारण
विवाहित पुरुष संग किन आकर्षित हुन्छन युवतीहरु ? यस्ता छन ६ कारण
काठमाडौं / हरेक महिला आफ्नो पार्टनर आफुले सोचे जस्तो होस् आफुलाई माया गर्ने आफुलाई बुझ्ने खाल को होस् भन्ने चाहान्छन त्यसैले महिला हरु आफु भन्दा अलि बढी नै उमेर भएको पुरुष लाइ मन पराउने गर्दछन तर कोहि महिला भने बिहे भएको पुरुष लाइ मन पराउने गर्दछन कारण एस्तो छ हेर्नुहोस
२. समझदारी :: महिलाका भावनात्मक कुरा पाको उमेरका पुरुषले बढी बुझ्छन् भन्ने बुझाइ महिलामा हुन्छ । महिलाहरुको भावना बुझ्न कम उमेरकाले नसक्ने र उनीहरुलाई तारिफ पनि पाका उमेरका पुरुषले गर्ने हुँदा उनीहरुलाई पाका उमेरका पुरुष चाहिन्छ । आफ्नै उमेरका वा कम उमेरका पुरुषबाट यी कुरा नपाइने हुँदा महिला पाका उमेरका पुरुष छान्छन् ।
विवाह पछि महिलाहरू मोटाउनुको ख़ास कारण त यस्तोपो रहेछ
नि’द्रा नलागे के गर्ने?